Izindaba - Izici eziyishumi ezithinta ukunemba kwemishini yezingxenye ezinemba kahle
Izici eziyishumi ezithinta ukunemba kwemishini ngokunemba izingxenye
Njengoba sonke sazi, isizathu sokuthi ukucubungula izingxenye zokunemba kubizwa ngokuthi ukucubungula imishini kungenxa yokuthi izinqubo zokucubungula nezidingo zenqubo ziphakeme kakhulu, futhi izidingo zokunemba komkhiqizo ziphakeme kakhulu, futhi ukunemba kokusebenza kwezingxenye zokunemba kufaka phakathi ukunemba kwesimo. Ukunemba kosayizi, ukunemba kwesimo, njll., Umhleli ufingqa lezi zinto eziyishumi ezilandelayo ezithinta ukunemba kokucutshungulwa kwezingxenye ngokunemba:
(1) Ukujikeleza kokuphotha kwethuluzi lomshini kungadala iphutha elithile ekunembeni kwemishini yezingxenye.
(2) Ukunganemba kwesitimela somhlahlandlela wamathuluzi womshini nakho kungaholela emaphutheni asesimweni sezingxenye ezinemba ezicutshungulwa wuhlobo lomsebenzi.
(3) Izingxenye zokudlulisela zingadala namaphutha ekucutshungulweni kokwenziwa komsebenzi, nakho okuyisici esibaluleke kakhulu samaphutha angaphezulu wezinto zokusebenza.
(4) Izinhlobo ezahlukahlukene zamathuluzi nezinsizakusebenza nazo zizoba nemiphumela ehlukahlukene ekunembeni kokwenziwa komsebenzi.
(5) Ngenkathi yokwenza imishini nokusika, ngenxa yokushintshwa kwesikhundla sephoyinti lamandla, uhlelo luzokhubazeka, oluzodala umehluko, futhi lungadala nezinga elihlukile lephutha ngokunemba kokwenziwa komsebenzi.
(6) Amandla wokusika ahlukene azophinde athinte ukunemba kokwenziwa komsebenzi.
(7) Amaphutha adalwa ukusonteka okushisayo kohlelo lwenqubo. Ngesikhathi sokucubungula ngomshini, uhlelo lwenqubo luzokhiqiza ukusikeka okuthile okushisayo ngaphansi kwemithombo yokushisa ehlukahlukene.
(8) Ukusonteka kohlelo lwenqubo ngenxa yokushisa kuvame ukudala ukuthi ukunemba kokwenziwa komsebenzi kuthinteke.
(9) Ukusonteka kwethuluzi lomshini ngenxa yokushisa kuzobangela ukuthi okokusebenza kukhubazeke.
(10) Ukusonteka okushisayo kwethuluzi kuzoba nomthelela omkhulu ku-workpiece.
(11) Ucezu lomsebenzi lukhubazekile ngokushisa, okubangelwa kakhulu ukushisa ngesikhathi senqubo yokusika.